Ubukristu Buphawulwa Njengesiphambusa
Masimbuyekeze uThixo ngenxa yoBabalo Lwakhe
Uze Ungamhendahendi uThixo
Ibonwe kangaphi 109 (Ama)Ixesha #UThixo oseNyameni #Ukholo
UThixo uyinto yokholo lwethu, hayi into yovavanyo
Ngamanye amaxesha, ubunzima kunye nokuphazamiseka kuyenzeka ngelixa uhamba kwindlela yokholo, kodwa sinokufikelela kuBukumkani obungunaphakade bamaZulu obuthenjiswenguThixo xa sinokholo olugqibeleleyo kwaye singakhalazinangantoni na njengoYobhi.
Amalungu eBandla likaThixo akholelwa kuThixo oze eseNyameni
AmaSirayeli ahlala ewalibala amandla kaThixo aze amvavanya entlango, namaYuda awazange awahoye amazwi obomi avela kuYesu bazebabonisa kuphela ukuba Uze esenyameni. NakwiXeshaloMoya oyiNgcwele, naye, uThixo uba ngumgibe kwabo bangakholelwayo kuKristu Ahnsahnghong nakuThixo uMama yaye bajongana novavanyo oluvela kuSathana.
“Abawugcinanga umnqophiso kaThixo, Abavumanga ukuhamba ngomyalelo wakhe;Bazilibala izenzo zakhe ezincamisayo,Nezibalulekileyo zakhe awababonisayo.” Iindumiso 78:10–11
Lowo Ukholwayo nalowo Ungakholwayo